दशै तिहारको लागि देउवा आफै पुगे किनमेल गर्न, किने आफ्नो लागि जुत्ता, दौरासुरुवाल – Etajakhabar
दशै तिहारको लागि देउवा आफै पुगे किनमेल गर्न, किने आफ्नो लागि जुत्ता, दौरासुरुवाल
काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेर बहादुर देउवा दशै तिहारको अवसर पारेर भृकुटीमण्डपमा आयोजित एक्स्पोको अवलोकनका क्रममा किनमेलमा समेत देखिए।काठमाडौको भृकुटीमण्डपमा नेपाल धागो उद्योग संघले आयोजना गरेको मेला तथा ठूलो चौरमा ४वटा प्रतिष्ठित जुत्ता चप्पल कम्पनीले गरेको प्रर्दशनीमा पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका देउवाले आफ्नो लागि केहि किनमेल (सपिङ्ग) गरे।
नेपालमा बनेका कपडा तथा जुत्ता चप्पलको बजार प्रबर्द्धन गर्न आयोजना गरिएको मेलामा देउवाले आफ्नो लागि जुत्ता, दौरासुरुवाल लगायतका कपडा किने। नेपालमा बनेका कपडा तथा जुत्ताहरुको मेला चासोपूर्वक अवलोकन गरि देउवाले किनमेल समेत गर्दा व्यवसायीहरु उत्साहित देखिन्थे। उनीहरुले पार्टीका सबै नेता कार्यकर्ताहरुलाई नेपाली उत्पादनलाई पहिलो प्राथमिकता दिएर उपभोग गर्न प्रेरित गर्नु सभापति देउवालाई आग्रह गरे।
उद्यमी समेत रहेका सांसद दिव्यमणी राजभण्डारीले नेपाली उद्यमीहरुले कुन अवस्थामा काम गरिरहेका छ्न्, उनीहरूको अवस्था कस्तो छ बुझ्ने तथा उत्प्रेरित गर्न सभापति कपडा एक्स्पो र जुत्ता चप्पल मेलामा आएको बताए। नेताहरूको यस्तो मेलाहरूमा हुने उच्च नेतृत्व तहको अवलोकन भ्रमणले नीतिगत तहमा निर्णय गर्न समेत सहयोग पुग्ने राजभण्डारीले बताए।
देउवाले मेलामा अवलोकन गरेर मात्र झारा टारेनन् किनमेल पनि गरे। मेलामा आफुलाइ चाहिने कपडाहरु किन्दै उनले भने देशको आर्थिक घाटा कम गर्न स्वदेशका कम्पनीलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए। सपिङ्गकै क्रममा उनले सबै नेपालीहरुलाई नेपालमै उत्पादित सामानहरु प्रयोग गर्न आग्रह गरे।
अवलोकनकै क्रममा उनलाई आफ्नो कम्पनीको कपड़ा उपहार दिए। उनले त्यसलाई स्विकारेनन्। बरु दौरा सुरुवालको कपडा परिवर्तन गरेर अर्को लिएI प्याकिङ गरेर उनले सामान घरमा पठाइदिन भन्दै गर्दा विल पठाएर रकम लिन भनेI देउवाले कतै सर्ट छाने, कतै स्वीटर लिए। १२ हजार पर्ने एउटा स्वीटर लिएका देउवालाई कसैले भन्यो यो भाउजुको लागि राम्रो हुन्छ। देउवाले तत्कानै जवाफ दिए, ‘ आरजु आफै छानेर लिन्छिन।’
सपिङ्गका क्रममा उनले धागो तथा कपडाको प्याभिलियनमा नेपाल मै उत्पादित दौरासुरुवाल, सट पाइन्ट, सुइटरको सपिङ सकेका थिए। त्यहाँबाट देउवालाई सांसद राजभण्डारीले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व केन्द्रीय सदस्य रामकृष्ण प्रसाईको कम्पनी शिखर शुज सहितले भृकुटीमण्डपको चौरमा गरेको जुत्ता चप्पल मेलामा लगेका थिए। शिखर, विएफ डीएरहील, रन र शुल्याण्डले गरेको मेलामा देउवाले जुत्ता समेत किन्न भ्याए। शिखरको कालो क्याजुयल शुज लिएका उनले अन्य स्टल समेत अवलोकन गरे। सँगै गएका राजभण्डारीले शिखरबाट दुई जोर र वीएफ डीएरहीलबाट एक जोर जुत्ता किनेका थिए। उनले गुणस्तरीय नेपाली जुत्ता उत्पादन हुन थालेपछि विदेशी जुत्ता लगाउन कम गरिएको बताए।
यो पनि पढ्नुहोस : ९२ हजारले अवलोकन गरे स्टक क्लियरेन्स मेला
काठमाडौं । दशैंको अवसर पारेर राजधानीको भृकुटीण्डपमा आयोजना गरिएको स्टक क्लियरेन्स मेला सकिएको छ । गत बुधबारदेखि सुरु भएको मेलाको ५ दिनमा ९२ हजारले अवलोकन गरेका छन् । चाड पर्वका लागि सस्तोमा सामान किन्न आउनेहरुको चापले आयोजक तथा व्यवसायीहरु उत्साहित बनेका छन् ।
इभेण्ट सोलुसन प्रालिको आयोजनामा सञ्चालन भएको मेलाले एकै छानामुनी सेवाग्राहीलाई सस्तो मूल्यमा गुणस्तरीय सामान किन्ने अवसर प्रदान गरेको नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष डा. राजेशकाजी श्रेष्ठले बताए । आगामी दिनहरुमा पनि यस किसिमका मेलाहरुलाई चेम्रले प्रवद्र्धन गर्दै लैजाने उनको भनाइ छ ।
इभेण्ट सोलुसनले पछिल्लो ३ वर्षदेखि नियमित रुपमा स्टक क्लियरेन्स मेला आयोजना गर्दै आईरहेको छ । चाडपर्वका बेला सस्तो मूल्यमा एकै छानामुनी स्वदेशी तथा विदेशी सामानहरु उपलब्ध गराउनका लागि मेलाको आयोजना गरिएको हो ।
मेलामा जुत्ता तथा चप्पल उद्यमी समुह अन्तरगतका ४ वटा नेपाली ब्राण्डको शोरुममा अवलोकनकर्ता तथा ग्रागहकको विशेष चाप देखिएको थियो । बिएफ डियर हिल, रन सुज, शिखर सुज र शु ल्याण्डका १ हजारभन्दा बढी मोडलका जुत्ता तथा चप्पलहरु १५ देखि ७५ प्रतिशतसम्मको छुटमा खरिद गर्न सकिने भएकाले खरिदकर्ताको चाप बढेको बिएफ डियर हिलका प्रबन्ध निर्देशक होमनाथ उपाध्यायले बताए । एक्स्पोमा नेपाल, भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश, चीन, थाइल्याण्ड र जापानका उत्पादन तथा प्रदर्शकहरुको सहभागिता रहेको थियो ।
Posted on: Monday, September 23, 2019 Time: 7:24:33
नायीका आँचल तनावमा, भनिन्, ‘यो अन्याय विरुद्ध ल’ड्न मलाई तपाईहरुको साथ चाहियो ‘
हवाई भाडा सस्तो हुने
रुकुम जाजरकोट घटनाको पहिलोपटक भयो नयाँ खुलासा
जाजरकोट रुकुम घटनाको नयाँ रहस्य, गो’प्य अ’ङ्ग नै फालेको आरोप (भिडियो)
काभ्रेमा ८० बर्ष यताकै भिषण बाढी, पुलहरू बगाए, बस्तीहरु डुबे (भिडियोसहित)
बाइस सङ्घसंस्थाद्वारा रुकुम घटनाप्रति भत्र्सना
आमाको ह’त्या गरि छोराले गरे देहत्याग (भिडियो)
झापामा एकै ठाउँमा भेटीए ७३ कोरोना सङ्क्रमित
सर्वोच्चको ऐतिहासिक फैसलाः लकडाउन खुलेको ३० दिनसम्म हदम्याद नलाग्ने
बाहिर निस्किनु भन्दा पहिले आज गृहमन्त्रालयले जारि गरेको सूचना हेर्नुहोस, नत्र दु:ख मात्र होइन कडा कारवाहीमा पर्नुहोला !
काठमाडौं स्थित त्रिभुवन शिक्षण अस्पतालमा अकल्पनीय घटना : जसले त्रसित बनायो !
ऋषि कपुरको निधन भएको केहि घण्टा नहुँदै अमिताभ बच्चनले गरे यस्तो चलाखी
भोलि देखि काठमाण्डौमा नयाँ नियम लागुहुदै, प्रसासन, प्रहरीले निकाल्यो आज यस्तो सूचना !
भारतले नेपाली भूमिमा आफ्नो देशमा (चिन) आउने सडक बनाएको नेपालले बिरोध गरेपछि, चीनले दियो नेपाललाई यस्तो जवाफ !
जोखिम बढेपछि काठमाण्डौ, भक्तपुर र ललितपुरमा लकडाउन कै बीच सरकारले लाग्नु गर्दै छ यस्तो नियम !
आजदेखि आउँदो जेठ १० गतेसम्मका लागि दुई पाङ्ग्रे सवारीसाधन सञ्चालनमा रोक
-20490 second ago
-19779 second ago
-17943 second ago
-16135 second ago
-15432 second ago
-13705 second ago
-13067 second ago
-11954 second ago